उवासंघको ५३ औँ साधारणसभा भव्य बन्दै, पद भन्दा ठुलो संस्थाको गरिमा हो : मुल संयोजक राजेन्द्र ओली – Saurahaonline.com
उवासंघको ५३ औँ साधारणसभा भव्य बन्दै, पद भन्दा ठुलो संस्थाको गरिमा हो : मुल संयोजक राजेन्द्र ओली
सौराहा अनलाइन | २०७६, २४ पुष बिहीबार
चितवन : चितवनका व्यवसायीहरुको साझा संस्था उद्योग वाणिज्य संघ चितवनको ५३ औँ साधारण सभा तथा अधिवेशनसगैँ चुनावी चटारो तीव्र बनेको छ । व्यवसायीहरुको हकहित प्रवद्र्धनका लागि स्थापित यस संस्थाको नेतृत्वमा आउने आकांक्षीहरु समेत बढेका छन् भने संघमा दुई पक्षिय चुनावी भिडन्त हुने संकेत समेत देखिएको छ ।
संघका कार्यसमिति सदस्य राजेन्द्र ओली चितवनका स्थापित युवा व्यवसायी हुन् । उनले विगत आधा दशकदेखि संघका विभिन्न पदमा रहेर कुशलतापूर्वक आफ्नो भूमिकासगै व्यवसायीक एकता, हित र प्रवर्दनमा अलग खालको पहिचान बनाएका छन् भने यहि कारण पनि उनी व्यवसायी माझमा निकै लोकप्रिय मानिन्छन् । तिनै युवा व्यवसायी ओली यो पटक उवासंघ चितवनको आगामी साधारण सभालाई भव्य र सभ्य बनाउन मुल संयोजक पदको भूमिकामा देखिएका छन् । यसै सन्र्दभमा आजको बहसमा संघको अगामी साधारणसभा तथा अधिवेशनको तयारी बारेमा तयारी समितिका मुल संयोजक उनै ओलीसगँ सहकर्मी सरस्वतीकुमारी शर्र्माले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
के छ ५३ औँ साधारण सभा तथा अधिवेशनको तयारी ?
हाम्रो तयारी भव्य छ । तयारीको अन्तिम चरणमा हामी छौँ । संघका काम र उपलब्धीहरु हाम्रा सदस्यहरु सामुन्ने देखिने गरि र उहाँहरुको समस्या गुनासो समेत सुन्ने र सामाधान गर्ने गरि हामी अगाडी बढेका छौँ ।
मुलु समिति अन्र्तगत अलग अलग उपसमितिहरु निर्माण गरि तयारीका काम गरेकै कारण पनि कुनै पनि किसिमको समस्या नआवस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ । यस पटक यो साधारण सभामा समुद्घाटनको लागि प्रमुख अतिथिको रुपमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री लेखराज भट्ट आउदै हुनुहुन्छ ।
व्यवसायीहरुको कस्तो सहभागीता रहनेछ त यो पटक ?
५३ औँ साधारण सभा तथा अधिवेशनका लागि ३ हजार ७ सय ४१ जना सदस्यहरु सहभागी हुनेछन् । साथै नयाँ नेतृत्वका लागि मतदान र उम्मेदवारी दिन सक्नेछन् ।
तुलनात्मक रुपमा यस पटक अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै व्यवसायी सदस्यज्यूहरुको सहभागीता रहनेछ । यस पटक हामी विगतमा व्यवसायीहरुको मागलाई मध्यनजर गर्दै सदस्यता दर्ता शुल्क निशुल्क गरेका छौँ । यस्तै आफ्ना समस्यासगैँ व्यवसायीक हितका एजेण्डा बारेमा उहाँहरु गम्भीरताका साथ लिई बढी भन्दा बढी सदस्यज्यू आउन अनुरोध पनि गर्दछु ।
यस पटक त अधिवेशन पनि हो, कसरी व्यवस्थापन हुदैछ, चुनावका लागि ?
हो चुनावको समेत चटारोले संघको सचिवालय र व्यवसायीहरुलाई छोएको छ । चुनाव निष्पक्ष रुपमा गराउन निर्वाचन समिति नै गठन गरि उच्च सर्तकताका साथ हामीले काम गरिरहेका छौँ । यस पटकको निर्वाचनमा संघको ईतिहासमा पहिलो पटक ईलेक्ट्रोनिक भोटिङ्ग मेसिनद्धारा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ । जसका कारण चुनावी नतिजाका लागि लामो समय लाग्ने छैन । व्यवसायीहरु ढुक्क भएर मतदान गर्न सक्नेछन् ।
संघमा आर्थिकसहितका विभिन्न खालका विवाद छ भन्छन् नि के हो खास कुरा ?
विगत आठ बर्षदेखि यस संस्थामा कार्य समिति सदस्यको रुपमा मैले निरन्तर रुपमा विभिन्न जिम्मेवारी लिएर काम गदै आएको छु । हालसम्म कुनै पनि पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरुले नियतवस व्यक्तिगत स्वार्थको लागि लागेको वा काम गरे जस्तो मलाई लाग्दैन । प्रक्रियागत कुराहरुमा कुनै त्रृटिहरु रहन गएको हुनुसक्छ । यसमा हामीहरुले समयक्रममा सुधार गर्दै गएका छौँ । आर्थिक परदर्शीताका सवालमा उवासंघ चितवन सधै अग्रणी छ, म निर्धक्क भएर भन्छु ।
नयाँ नेतृत्वको लागि के छ सहमति हुन्छ कि फेरि चुनाव हुन्छ ?
विगत ६ दशकको लामो र गौरवशाली ईतिहास बोकेको उवासंघ चितवनमा विभिन्न कालखण्डमा यस संघलाई निरन्तर योगदान गर्नुहुने धेरै जना हुनुहुन्छ । नेतृत्वको लागि आकांक्षा राख्नु सामान्य कुरा हो । निजि क्षेत्रको छाता संघको रुपमा समेत रहेको यस संस्थामा कुनै पनि राजनैतिक, जातिय, वर्गाीय र धार्मीक लगायतका आधारमा नेतृत्व वा गुटबन्दी हुनु राम्रो होईन ।
यसले व्यवसायीक एकता, हित र प्रर्वद्धनमा सधै दरार पैदा गर्छ । यस्तो नहोस् भनेर विगतदेखि व्यवसायीहरु एकवद्ध भई साझा प्रयासमा नेतृत्व चयन हुने गर्दथ्यो । संघलाई माया गरेर योगदान दिने ईच्छा राख्नु सबैको अधिकारको कुरा हो । यसमा दुईमत हुने कुरै भएन । सहमति र सहकार्यका लागि साथीहरु जुटिसमेत रहनुभएको छ । यो स्वागतयोग्य कुरा हो । यद्यपी निर्वाचनमा नगएसम्म के हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
तपाईले त्यो भने पनि निर्वाचनमै जाने वातावरण छ, व्यवसायीहरु म यो वा उ पदमा उठ्छु भनेर घोषणा गरिसकेका छन् नि ?
मैले अघि पनि भनेको छु की ! नेतृत्वको लागि चाहाना गर्नु सामान्य कुरा हो । उवासंघ चितवनको विधान अनुसार सक्षम र संघमा एक कार्यकाल सदस्य वा पदाधिकारी भएको व्यक्ति नेतृत्वको निर्वाचन प्रक्रियामा आउन पाउने हुदाँ, उहाँहरुको कुरा पनि ठिकै हो । आउछु भनेर भन्न त पाउन पर्यो नि ।
भनेपछि अब तपाई पनि संघको पदाधिकारीमा आउने सोचमा हो ?
यहाँ व्यक्ति विशेषको कुरा होईन्, म, अथवा जोसुकै होस्, व्यक्ति भन्दा संस्थाले जित्नुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्दछु । म भन्ने कुरा गौण हो । र यहि कारण पनि संस्थामा लामो अनुभवकै कारण मेरो आफ्नो योग्यता पुगेको म ठान्दछु ।
संस्थागत हितका लागि राजेन्द्र ओलीले गरेको कामको ईतिहास छ, त्यो जगजाहेर पनि छ । यद्यपी सबैभन्दा पहिले हामी व्यवसायी हौँ, राजनितिक कार्यकर्ता होईनौँ । पद भन्दा ठुलो संस्थाको गरिमा हो । यसलाई थप उचाईमा पुर्याउदै बदलिदो युगमा स्मार्ट व्यवसायी कसरी बन्ने र बनाउन सकिन्छ भन्नेमा मेरो नयाँ अवधारणा छ ।
फेरि संघमा सहमतिका नाममा गोलप्रथा भो भनेर कतै सहमति कतै विरोध छ त ?
यो कुरा साचो हो । राजनैतिक धुव्रीकरण संघमा छिर्न लागेपछि भएको यि कुरा अब सहमति र असहमति दुवैमा आ–आफ्नो धारणा आउनु व्यक्तिगत कुरा हो । यि कुरा उहाँहरुले नै जान्नु पर्छ । तर संघको गरिमा उचो बनाउन सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा नै पहिलो प्रथामिकता हो भन्ने लाग्छ ।
मेरो व्यक्तिगत विचारमा सहमति हुनु थियो, भयो । गोलाप्रथा एउटा प्रक्रिया मात्र हुनसक्छ । यसबाट कोही आत्तिनुपर्ने अवस्था नै छैन । संघको विधान अनुसार अघि बढ्न यसले रोक्छ जस्तो लाग्दैन ।